Fadhigii Barlamaanka oo maanta u baaqday kooram la'aan (Magacyada Xildhibaanada maqan oo la yeeriyey) - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Fadhigii Barlamaanka oo maanta u baaqday kooram la’aan (Magacyada Xildhibaanada maqan oo la yeeriyey)
Kulankii Xildhibannada Golaha Shacabka ee maanta ayaa u baaqday kooram la’aan, kadib markii ay soo xaadiri waayeen tiradii loo baahnaa xildhibaannada Baarlamaanka inuu ku furmo fadhiga.
Xildhinaannada ayaa maanta u balansanaa doodda socota ee xeer-hoosaadka Golaha shacabka, wuxuuna kulanku ahaa kii 7-aad ee kalfadhiga 4aad, iyadoo la soo xiray markii soo xaadiree 120 xildhibaan oo kaliya, sida uu sheegay guddoomiyaha Baarlamaanka.
Waxaa soo xaadiray kulanka maanta 120 mudane, iyadoo ay Baaralmaanka u diiwaangashan yihiin 273 Mudane oo intooda badan ku sugan magaalada Muqdisho, taasoo dood ka dhex dhalisay xildhibaannada qaarkood oo soo jeediyay in la sameeyo maxkamad lagu qaado xildhibaannada aan xilkooda gudan.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Mursal ayaa amray in la akhriyo xildhibaannada ka maqan kulankii maanta, wuxuuna sheegay inaan la aqbali karin in xildhibaanno jooga magalada Muqdisho ay ka maqnaadaan, wuxuuna caddeeyay in 16 xildhibaan ay fasax ku maqan yihiin, iyadoo ku dhowaad 140 mudane ay sabab la’aan u maqnaayeen.
Xildhibaannada ayaa intooda badan xaadiray xilliyada ay jiraan doorashada iyo mooshinnada, laakiin waxay ka baaqsadaan kulamada caadiga ah ee Baarlamaanka.
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday oo shir isugu yeeray DF iyo dowladaha Xubnaha ka ah